ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သီးသန့်ခွဲစောင့်ကြည့်မှုကိုမလိုက်နာသူတွေအမှုဖွင့်ခံရ၊ ကန့်သတ်ကာလအတွင်း မန္တလေးကအခြေခံလူတန်းစားတွေကို ကျပ်တစ်ဘီလျံ မတည်ထောက်ပံ့ဖို့ရှိ၊ ပြင်သစ်မှာ ဓားနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဦးသေ
5 เม.ย. 2563 - 09:55 น.
(၂)ပြည်ပကပြန်လာသူတွေကို သီးသန့်စောင့်ကြည့်ရာမှာ စည်းကမ်းမလိုက်နာသူတွေကို အမှုဖွင့်
(၃) နယူးယောက်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၅၀၀ ကျော် ထိ မြင့်တက်
နယူးယောက်မြို့က ဆေးရုံတွေမှာ ဆေးပစ္စည်းပြတ်လပ်မှုနဲ့ ကြုံနေရပါတယ်။
နယူးယောက်ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာ ဗဟိုချက်မဖြစ်နေပါတယ်။
(၄) ပြင်သစ်မှာ ဓားကိုင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နှစ်ဦးသေ၊ ငါးဦးဒဏ်ရာရ
ဒီတိုက်ခိုက်မှုနောက်ကွယ်မှာ အကြမ်းဖက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ ရဲတွေက ယူဆနေပါတယ်။
ပြင်သစ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအမြင့်ဆုံး ငါးနိုင်ငံစာရင်းထဲ ပါဝင်နေပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှု ၅ ခုကို ပြင်သစ် ဖော်ထုတ်နိုင်
အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ရဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပြင်သစ် ချီတက်ပွဲတွေမှာ လူ ၃ သန်းကျော် ပါဝင်
อัลบั้มภาพ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သီးသန့်ခွဲစောင့်ကြည့်မှုကိုမလိုက်နာသူတွေအမှုဖွင့်ခံရ၊ ကန့်သတ်ကာလအတွင်း မန္တလေးကအခြေခံလူတန်းစားတွေကို ကျပ်တစ်ဘီလျံ မတည်ထောက်ပံ့ဖို့ရှိ၊ ပြင်သစ်မှာ ဓားနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဦးသေ